Waakuma Xiddiga soo afjari doona Xoogii ay Ballon d’Or ku haysteen Ronaldo iyo Messi? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Waakuma Xiddiga soo afjari doona Xoogii ay Ballon d’Or ku haysteen Ronaldo iyo Messi?
(12-7-2018) Xiddigaha kala ah Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa ahaa labada Cayaaryahan ee dhamaan ku Guuleystey abaal marinta Ballon d’Or tan iyo laga soo bilaabo 2008 waxaase hadda muuqata in ay soo dhamaatay waayahpoodii abaal marintaas Gaara ahaan 2018 oo loo saadaalinayo Cayaaryahan cusub in lasiin doono.
Cayaaryahanka Real Madrid ee dalka Croatia Luka Modric ayaa inta badan dadka ka faalooda cayaarta kubada Cagta waxa ay u saadaaliyeen in lagudoonsiin doono abaal marinta Ballon d’Or 2018 kadib markii uu dalkiisa u soo saaray Finalka koobka aduunka.
Luka Modric ayaa la leeyahay wax shaki ah lama gelin doono in uu qaadan doono Ballon d’Or hadii uu dalkiisa u qaado koobka aduunka balse hadii laga qaado waxa uu kula tartami doonaa Cayaartoy reer France ah in kasta oo uu kaashan doono ku Guuleysiga koobkii 3 aad ee Xiriir ah ee ah Champions League Waxaana kabtanka dalka Croatia uu yahay kan hogaamiya dalkiisa isla Markaana dhigay wacdaraha ugu weyn ee koobka aduunka 2018.
Sidoo loogu kala Guuleystey Ballon d’Or ilaa 2007?